Daaficii hore ee Liverpool John Arne Riise oo isaga fariistay ciyaaraha – Gool FM
Daaficii hore ee Liverpool John Arne Riise oo isaga fariistay ciyaaraha
(Oslo) 13 Juunyo 2016. Daaficii hore ee Liverpool iyo xulka Norway John Arne Riise ayaa ka dhawaajiyay inuu isaga fariistay ciyaaraha isagoo 35-jir ah.
Daafaca garabka midix, kaa oo Champions League kula guuleystay Reds sanadkii 2005 ayaa ka soo muuqday toban kulan oo qura xilli ciyaareedkan kooxda Aalesund ee ka dhisan dalkiisa.
Sikastaba, wuxuu go’aansaday inuu kabaha iska laalo kaddib markii uu garowsaday inuusan awoodin inuu la yimaado xooga jireed ee la isaga baahan yahay si uu u ciyaaro horyaal heer sare ah.
“Hadafkeyga gudaha wuxuu ahaa inaan ka ciyaaro kubbada cagta heerka sare ee horyaalka Norway ilaa aan gaaro 40-jir, laakiin taas ma noqon karto, halkan ayay ku joogsaneysaa.” Sidaa ayuu ku soo qoray boggiisa shaqsiyadeed.
“Muddooyinkii dambe waxaa soo ifbaxay dareen cusub oo aniga ah kaa oo ii sheegaya in wixii intaan ka dambeeya aan lahayn qawad igu filan aan teeda ugu fiican uga fuliyo.
“Waan jeclahay inaan ciyaaro kubbada cagta laakiin dhiiro galinta weli ma ahan mid xoog ku filan leh inay tartanka ka ciyaarto heerka ugu sarreeya, jirkan iyo madaxan wax badan ayay soo mareen 20-kii sano ee la soo dhaafay.
“Waa ogolaansho culus oo xanuun badan ayna ka buuxdo qiirad laakiin gabi ahaan waa iga daacad.”.
Riise ayaa xulkiisa u saftay 110-kulan 14-sano uu ku qaatay waayihiisa ciyaaraha caalami ee xulka Norway, wuxuuna daaficii hore ee Liverpool sidoo kale u soo ciyaaray kooxaha Monaco, Roma, Fulham, APOEL iyo Delhi Dynamos.
GOOGOOSKA: Spain vs Czech Republic 1-0 (Spain oo mid ku adkaatay)
Lukaku oo sheegay in khibradii ay ka soo dhaxleen Wold Cup ay caawa ula soo shir tagi doonaan xulka Talyaaniga